Nnyocha nke mba chọrọ: mba niile na ihe achọrọ | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | Atụmatụ, General
Mara nke Nnwale ule chọrọ site na mba aghọwo ozi dị oke mkpa mgbe otu afọ nke ọrịa na-efe efe. Nwere mmasị ịnọnyere ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga-achọ njem ugboro ugboro maka azụmahịa ma ọ bụ ịga leta ndị ikwu.
N'ihi na mba ọ bụla nwere ọnụọgụ dị iche na-ebute ọrịa ahụ kemgbe ọgwụ mgbochi na-aga nwayọ, enweghi ike idobe usoro zuru oke na ihe ndị dị mkpa a chọrọ iji gaa. Ọbụna ọ gaghị ekwe omume itinye nke a n'ọrụ n'ime European Union, nke ndị steeti ha na-adịkwa iche na mkpa ọ dị ma ọ bụ ịmeghị ule iji gaa mpaghara ha. Maka ihe a niile, anyị ga-enyocha gị ule dị mkpa nke Covid site na mba.
1 Nnyocha nke mba chọrọ site na mba: site na mkpa gaa na-atụ aro
1.1 Nnyocha nnwale na European Union
1.1.5 Netherlands, n'etiti ndị kacha sie ike n'ihe gbasara ule Covid chọrọ nke mba chọrọ
1.2 Ule nyocha nke mba ndị ọzọ na-abụghị European Union chọrọ
1.2.3 Switzerland, onye ọzọ kachasị achọ maka usoro nyocha Covid nke mba chọrọ
Nnyocha nke mba chọrọ site na mba: site na mkpa gaa na-atụ aro
Anyị ga-amalite nyocha anyị na European Union n'onwe ya, ebe ọ bụ na mba ndị mejupụtara ya bụ ndị a kacha leta. Mgbe ahụ, anyị ga-enyocha ọnọdụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, ọkachasị na mba ndị kacha anabata ndị njem.
Nnyocha nnwale na European Union
Steeti European Union nwere ụfọdụ pụtara iwu siri ike mgbe ị na-anabata ndị ọbịa. Mgbasa siri ike nke ọrịa a na-efe na mpaghara ha na-adụ ya ọdụ otu a. N'ezie, na mgbakwunye na ule ndị kwekọrọ na ya ma ọ bụ nyocha PCR, ha na-ajụkarị maka akwụkwọ ndị ọzọ. N'ọdịnihu dị nso, a na-atụle ya iji mejuputa a Paspọtụ Covid. Ka anyị lee iwu site na mba.
Tụlee España nnukwu nsogbu. Ya mere, nha ya bụ nke kachasị sie ike. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na mba anyị, ị ga-eweta PCR na-adịghị mma nke rụrụ 48 awa tupu ị rute. Na mgbakwunye, ị ga-edebanye aha na a ihe ndekọ dijitalụ na, otu ugboro na mba, chekwaa a 10 ụbọchị kwarantaini nke belata 5 ma ọ bụrụ na ị gosipụta ule Covid na-adịghị mma.
Ọ naghị anabata ịpụ si Spain n'oge ahụ. Ọ bụrụ n ’isi mba ọzọ mee ya, ị ga - eweta PCR adịghị mma rụrụ rue elekere 72 tupu ọbịbịa gị. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-emerịrị a inyi elektrọnik na ị naghị arịa ọrịa wee dejupụta a Ọnọdụ ndị njem. N'ikpeazụ, ha ga-achọ a 7 ụbọchị kwarantaini.
Igwe ọkụ ma ọ bụ igwe PCR
Ndị agbata obi anyị na-ekwe ka anyị banye na obodo ha, mana ị ga-ewetara PCR na-adịghị mma yana kachasị afọ 72 ma kpuchie a nkwupụta na ị nweghị Covid. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà n'ụzọ ma ọ bụ na mbata gị, ị kwesịrị ijide onwe gị.
Ọ bụ otu n'ime mba izizi ihe otiti nke ọrịa na-enye ohere ntinye nke Spain. Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ ileta ebube dị ka Rome o FlorenciaIkwesiri igosiputa PCR na-adighi nma nke mere kariri 48 awa tupu ị gawa ma ị ga-ejupụta akwụkwọ ikpe tupu ịmalite njem ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà, ị ga-anọrọ onwe gị.
Netherlands, n'etiti ndị kacha sie ike n'ihe gbasara ule Covid chọrọ nke mba chọrọ
Dị ka anyị na-agwa gị, n'etiti mba ndị na-ekwe ka njem si Spain, nke a bụ otu n'ime iwu kachasị sie ike n'ihe chọrọ. N'ihi na ha na-arịọ gị maka ule PCR ruo awa 72, yana iji mejupụta a ụdị nyocha ahụike ma n 'uzo n' uzo na nloghachi na ihe ndi ozo.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’agbanyeghị ihe niile a ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla, ha ga-egbochi gị ịbata obodo ahụ. Na, ọ bụrụ na ọ na-triggered mgbe ị rutere, ị ga-azọpụta 10 ụbọchị kwarantaini.
I nwekwara ike ịga onye agbata obi anyị ọdịda anyanwụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana yana mmachi dị iche iche. Must ga-enyerịrị PCR na-adịghị mma ma rụọ ya na 72 awa tupu ịbanye na mba ahụ.
Kwesịrị ikpuchi a kaadị ebe njem Na, ọ bụrụ na Spain nọ na ọkwa nke ihe karịrị 500 ikpe na 100 bi na (nke na-abụghị ikpe ugbu a), ị ga-azọpụta a 14 ụbọchị kwarantaini. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gaa Madeira o Azores, ha ga-arịọkwa gị ka ị jupụta na epidemiological ajuju.
Mmadu na anata ogwu Covid
Ule nyocha nke mba ndị ọzọ na-abụghị European Union chọrọ
Anyị na-achọta ọtụtụ ihe a na-achọsi ike na mba ndị na-esiteghị na mbara European. N’obodo ụfọdụ, a chọghị ihe akaebe, mana anyị ga-ewepụ ha n’akụkụ. Ka anyị hụ ndị chọrọ ụdị ụfọdụ nke ihe achọrọ.
Anyị na-amalite site na steeti nke hapụrụ European Union ma nwee otu n'ime ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi kachasị elu n'ụwa. Nwere ike ịga leta ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana ị ga-ejupụta a ụdị ọnọdụ ndị njem mgbe i rutere. Na mgbakwunye, dabere na oge epidemiological nke ọ bụ, ịnwere ike ịme ka a 10 ụbọchị kwarantaini.
Na mba a, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa enweela ọganihu dị ukwuu. Otú ọ dị, ekwenyeghi na ndi njem si Spain abanye. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị si ebe ọzọ, ị ga-enwe ike ịbanye mba ahụ, mana ị ga-eweta PCR na-adịghị mma emere 72 awa tupu ịbịaru ma ọ bụ na ụbọchị dị nso na ya.
Switzerland, onye ọzọ kachasị achọ maka usoro nyocha Covid nke mba chọrọ
Obodo Switzerland dị na obi nke Old Continent na, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke European Union, ọ bụ akụkụ nke Mpaghara Schengen. Nkwekọrịta a kpochapụrụ ókèala mpụga ya, agbanyeghị, ugbu a, Switzerland na-egbochi nnabata nke ndị njem.
Nwere ike ịgakwuru ya, mana ị ga-ewetara PCR na-adịghị mma emere 72 awa tupu ị rute. Ozugbo e, ị ga-eme a 10 ụbọchị kwarantaini Enwere ike belata nke ahụ na 7 ọ bụrụ na ịnweta PCR ọzọ. Ọzọkwa, ị ga-mezue a kọntaktị tracing kaadị.
Mba nke oria ojoo a si bia na-egbochi ugbu a banyere ikwenye ndi ọbịa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga China, ị ga-eweta PCR na a IGM (nchọpụta immunoglobulin) emeghị nke ọma ka ọ dị awa 48 tupu ọbịbịa gị. Na mgbakwunye, ha ga-arụ ọrụ site na ụlọ nyocha nke dị na whitelist nke ụlọ ọrụ nnọchi anya mba ahụ nyere.
Naanị nke a, ọ ga-enye gị a kaadị na mgbe ị na-na China, ị ga- megharịa PCR ma jupụta na a ụdị ahụike. Ọ bụrụ na nke mbụ dị mma, ị ga-akwụ ụgwọ ịgafe a 14 ụbọchị kwarantaini.
Mba North America na-amachibido ịbanye na ókèala ya nye ndị njem gafere 14bọchị iri na anọ tupu ị rute Spain. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na mba ọzọ, ị ga-ekpuchi a ụdị ozi nakwa a nkwupụta ahụ ike tupu ịla. Na mgbakwunye, ala nke ọ bụla nwere mgbochi nke ya.
Onye agbata obi anyị n’ebe ndịda akwụsịtụla njem ụgbọelu si Spain. Ọ bụrụ na ị si mba ọzọ bata, ị ga-eweta PCR na-adịghị mma emere ruo awa 72 tupu njem ahụ. Na mgbakwunye, a ga-ede ya na French, Bekee ma ọ bụ Arabic. N’ikpeazụ, ị rutere, ha ga-arịọ gị kaadị ahụike ndị njem.
Ọ bụ ezie na ọ dị na antipodes anyị, ị nwere ike ịchọrọ ma ọ bụ chọọ ịga Australia. N'okwu ahụ, anyị ga-agwa gị nke ahụ enyeghị ikike na Spain. Ọ bụrụ na ịhapụ mba ọzọ, ha ga-arịọ gị maka otu nkwupụta njem ma enwere ike ịmanye gị ịgafe a 14 ụbọchị kwarantaini.
N’agbanyeghi na o di otu n’ime obodo ebe oria ojoo a kporojii, Brazil nyere gi aka isi Spain bia. Agbanyeghị, ị ga-ewetara PCR na-adịghị mma nke emere ruo awa 72 tupu njem gị ma dejupụta a ụdị ahụike.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mkpa ịnwale Covid site na mba, Mexico bụ otu n'ime obere ihe na-achọ. Iji gaa ebe ahụ, naanị ị ga-ekpuchi oku Ajuju njirimara ihe ojoo n'ime ndị njem mgbe i rutere.
Mba ndị Caribbean, nke jikọrọ akụkọ ihe mere eme na Spain, na-enye gị ohere ịbanye ma ọ bụrụ na ị si mba anyị. Agbanyeghị, ọ na-achọsi ike n'ihe gbasara ihe achọrọ. Ga-eweta PCR emere awa 72 tupu ị gawa.
Mgbe ị bịarutere, ị ga-dejupụta a nkwupụta ahụike ọ ga-abụkwa na ha mere gị PCR ọzọ. Na mgbakwunye, ị nwere ọrụ ịkwụ ụgwọ a ichegbu onwe 30 US dolla na, ọ bụrụ na PCR ikpeazụ ekwuru dị mma, a ga-amanye gị irube isi nnọpụ iche.
Obodo a enweela oke oria ojoo a. N'ezie, ka ọ dị ugbu a, a machibidoro njem site na Spain. Ọ bụrụ na ịmee site na mba ọzọ, ị ga-eweta PCR na-adịghị mma ruo elekere 72 wee banye a inyi nke ahu ike. N'ikpeazụ, ị ga-enyerịrị onyinye ihe akaebe na inwere mkpuchi Nke ahụ kpuchiri mmefu ahụike nke Covid nwere ike bụrụ na ị bute ọrịa ahụ.
Vidlọ ọrụ nchọpụta Covid-19 na New Zealand
Ọ bụ otu n'ime mba ndị mbụ, metụtara China, na-arịa ọrịa a. Ikekwe ọ bụ ya mere o ji esiri ike mgbe ị na-anabata ndị njem si mba ọzọ. N'ihe banyere ndị si Spain, ha anaghị ekwe ka ịbanye ma ọ bụrụ na ha ejiri ụbọchị 14 gara aga na mba anyị.
Akwụsịla ụgbọ elu si Spain, opekata mpe, ruo April 30. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na mba ọzọ, ị ga-eweta PCR na-adịghị mma n'asụsụ Bekee wee mee ya ruo awa 72 tupu ịbata. Ọzọkwa, enwere ike ịmanye gị ịchekwa 14 ụbọchị kwarantaini.
Ọzọkwa mba Andean nwere ụgbọ elu si Spain amachibidoro, ma ọ dịkarịa ala ruo etiti ọnwa Eprel. Ọ bụrụ na i si ebe ọzọ bata, ị ga-eweta PCR adịghị mma emere 72 awa tupu njem ahụ. Ga-mkpa bulite a akụkọ na-adịghị mma ma kpuchie a inyi nke ahu ike nwekwara ofụri 72 awa tupu ụgbọ elu gị na njikọ a.
Na mmechi, anyị emeela ka ị nyochaa nke Nnyocha nnwale chọrọ site na mba. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịga njem, ị ga-enwe ọtụtụ mgbochi. Ma nke a agaghị emeziwanye ruo mgbe ọgwụ mgbochi ahụ dị oke. Ma ọ dịkarịa ala ị nwere ike ịnọgide na-eme njem, nke abụghị obere ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Nnyocha nnwale chọrọ site na mba